Fetiben'ny lohataona 'mijanona an-trano' any Shina no miteraka fisondrotana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fetiben'ny lohataona 'mijanona an-trano' any Shina no miteraka fisondrotana
Mba hanonerana ny fahaverezan'ny fivoriam-pianakaviana, ny fety ary ny fiarahan-dia, sinoa maro no nisafidy handefa "parcels fanomezana"
Ny manam-pahefana sinoa dia nanoro hevitra ny olona hipetraka hatrany mba hanakanana ny fiparitahan'ny COVID-19
Ny orinasam-panaterana Sinoa dia miakatra 223 isan-jato isan-taona
Ny orinasam-pitaterana entana any Shina dia nandefa fonosana 10 miliara teto an-toerana tao anatin'ny 38 andro monja tamin'ity taona ity
Ireo orinasam-panaterana entana any Shina dia nitatitra fa nitombo be ny fandraharahana nandritra ny Fetiben'ny Lohataona satria Sinoa an-tapitrisany no nijanona tamin'ny fialantsasatra fanao isan-taona.
Ny alakamisy sy zoma, ny roa andro voalohany tamin'ny fialantsasatry ny Fetiben'ny lohataona nandritra ny herinandro, ny orinasam-panaterana Shinoa dia nitentina fonosana 130 tapitrisa, hatramin'ny 223 isan-jato isan-taona, dia nampiseho angon-drakitra avy amin'ny State Post Bureau.
Alohan'ny fialantsasatry ny Fetiben'ny Lohataona, fotoana iray manan-danja amin'ny fihaonamben'ny fianakaviana izay mazàna mahita ny fifindra-monina ataon'ny olona manerana ny firenena, nanoro hevitra ireo mpiasa mpifindra monina sy ny mponina ny tompon'andraikitra sinoa mba hijanona hanakanana ny fihanaky ny Covid-19.
Mba hanonerana ny fahaverezan'ny fivoriam-pianakaviana, fety fialantsasatra ary fiaraha-mikorana, maro no nisafidy ny handefa "parcels fanomezana" na hividy an-tserasera ho an'ny fianakaviany sy ny namany lavitra, ka mitaky ny filan'ny lojika.
Nanome toky ny governemanta fa hanome antoka ny famatsiana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary nangataka sehatra e-varotra sy orinasa mpamokatra lojika mba hiantoka ny fandidiana ara-dalàna mandritra ny vanim-potoana.
Hatramin'ny alahady, ny orinasam-panaterana mazava an'i Shina dia nandefa fonosana 10 miliara teto an-toerana tao anatin'ny 38 andro monja tamin'ity taona ity, ary namorona firaketana vaovao.
Ny ozona dia fohy kokoa noho ny 80 andro amin'ny 2020 ary 79 andro amin'ny 2019, hoy ny State Post Bureau.